Yintoni kwaye ibaluleke kangakanani i-ecomobility | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Yintoni kwaye kubaluleke kangakanani ukungalingani
IsiJamani sasePortillo | | Yendalo
Ukwanda kongcoliseko kwizixeko ezikhulu kunye nefuthe elibi lokutshintsha kwemozulu kunye nokufudumala komhlaba, kunyanzela izixeko ukuba zenze ukuthuthwa kwazo kungabi yingozi kwindalo esingqongileyo. Uninzi lwemithombo yokungcolisa ukukhutshwa kwegesi ezixekweni zivela kwezothutho. Ngezigidi zezithuthi ezijikelezayo ngalo lonke ixesha, iziphumo ezifunyanwa ngabemi kunye nokusingqongileyo zinkulu.
Ukunciphisa ezi ngxaki, kuvela ukungalingani. Kukuhamba okuzinzileyo okuhlangeneyo nezixeko ukunciphisa ifuthe kwimeko yezothutho. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yeyiphi i-ecomobility equlathe kwaye ineziphi iimpawu?
1 Yintoni i-ecomobility?
2 Ukubaluleka kokungalingani
3 Izisombululo eziphakamisa ukuhamba okuzinzileyo
4 I-Sertrans kunye ne-ecomobility
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukungalingani kuvela ngenxa yesidingo sokungenisa umxholo we-ecology kwezothutho. Ukuhamba kwesixeko kuxhomekeke kuhlobo lwepetroli esetyenzisiweyo, uthungelwano lweendlela, ukufumaneka kweendlela zebhayisekile, umthamo wezithuthi zikawonke-wonke, njl. Ke ngoko, kubalulekile ukubandakanya amanyathelo okunciphisa ungcoliseko.
Ukungalingani kubandakanya ezo nkqubo zeendaba zikhokelela abantu kunye nezinto ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye, kugcinwa kwaye kukhuselwa indalo nokusingqongileyo. Ukuhamba okunempilo isinceda ukuba siqhubeke kwikamva elikude kakhulu ukunciphisa ungcoliseko ngokuqhubekayo. Umxholo wophuhliso oluzinzileyo nawo ungena kwi-ecomobility. Kuyimfuneko ukuba kwezothutho sikwazi ukuhlangabezana neemfuno zangoku ngaphandle kokuyekisa izizukulwana ezizayo ukuhlangabezana nezabo.
Ukuhambelana kukwaziwa njengokuhamba okuzinzileyo. Ayiloxesha lokuqala uve ngalo. Nangona kunjalo, ihlala ididekile nemisebenzi enje ukuhamba, usebenzisa izithuthi zikawonke-wonke okanye ukuhamba ngebhayisikile. Kuyinyani ukuba ezi zenzo zithathu zinceda ukunciphisa ukungcoliseka kwendalo kwaye zihamba ngokuzinzileyo. Kodwa i-ecomobility ayisiyiyo le kuphela. Yindibaniselwano yeendlela ezingcolisayo zothutho kunye nothungelwano lwendlela olwenza ukuba uhambo luhambe.
Uthutho oluzinzileyo lwedolophu lubalulekile ukuba sifuna ukuthintela ukusweleka kwangaphambi kwexesha kungcoliseko. Ungcoliseko lomoya kuthiwa yinto ethe cwaka ejongene nokubulala abantu. Yintoni egqithisile, iyandisa imeko yesifuba, isifo somzimba kunye nezinye iingxaki zokuphefumla kunye neentliziyo. Ngesi sizathu, ezothutho lwethu kufuneka zibe zezona zininzi zendalo.
Yonke imihla i-ecomobility ifumana ubunzima ngakumbi eluntwini. Kuqhelekile ukubona indlela abantu abayibiza ngayo kwaye yinxalenye yesigama esiqhelekileyo. Ubume bendalo obushiywe zizithuthi zethu buyanda minyaka le. Kwinqanaba lomntu ngamnye akuthethi nto, kodwa baninzi kakhulu kwihlabathi liphela.
Ukusetyenziswa kwemoto kunye nezinye izithuthi ezifuna amafutha angcolisayo yinto eqhelekileyo. Isithuthi ngasinye Ikhupha iitoni ze-CO2 emoyeni ngosuku. Ukongeza, kufuneka sithathele ingqalelo ukuthuthwa kwempahla. Nangona inxibelelene noqoqosho kunye nokukhula (ngokudala imisebenzi), licandelo elingcolisa ngokufanelekileyo. Kungenxa kula masebe ezothutho, apho kuyimfuneko ukuphumeza iintshukumo ezinceda ukulingana.
Ukubaluleka kokungalingani kuxhomekeke kwisidingo sokuphucula umgangatho womoya kunye nempilo ezixekweni. Phantse iipesenti ezingama-40 zokungcolisa ukukhutshwa kwegesi ezixekweni zivela ekuthuthweni kwezorhwebo.
Ngokungafaniyo noko kucingelwayo, ukusetyenziswa kwezithuthi ezingcolisayo akuchaphazeli okusingqongileyo okanye impilo kuphela, kodwa noqoqosho kunye noluntu. Oku kungenxa yokonyuka kwenqanaba leengozi, ukungalingani kunye nelahleko yokhuphiswano ngenxa yokugqithisa kwezithuthi ezijikelezayo.
Izisombululo eziphakamisa ukuhamba okuzinzileyo
Ukuhamba okuzinzileyo ayisiyongokuhamba nje ngebhayisikile kuphela, ukukhwela ibhasi okanye ukuhamba. Imalunga nokuphakamisa izisombululo ezahlukeneyo zokuzinzisa ngakumbi. Ukuze ubone umzekelo, kwinkongolo kwathiwa kwisitalato esibanzi seemitha ezi-3,5, abantu abangama-2.000 1 banokudlula ngemoto kwiyure enye. Ukuba ngabahambi ngebhayisikile, li-14.000; abahamba ngeenyawo, abangama-19.000; ngomgaqo kaloliwe, 22.000 kunye kwiibhasi, ezingama-43.000. Kwaye ezinye ezininzi yimetro, engcolisa ngaphantsi kwebhasi.
Ayisiyombambano yokukhetha uthutho olwaneleyo, kodwa kuvavanya inani labantu abanokuhamba kwisitalato esinye. Ukuba sikhetha isithuthi esinokuhlalisa abantu abaninzi, siya kube sinciphisa kakhulu ungcoliseko.
Ezinye zezenzo ezenziwa kukungakhathali zezi:
Sebenzisa iinkqubo zebhayisikile zikawonke-wonke kwizixeko ezininzi.
Beka phambili ukuhanjiswa koluntu ngasese.
Yandisa iindawo zabahambi ngeenyawo.
Ukuthintela ukungena kweemoto kwiindawo ezithile zesixeko.
Kwimeko yokusebenzisa imoto, yenze ngokuhlala ubuninzi.
Enye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukuhamba okuzinzileyo kukuma kweendlela. Iileyili kufuneka zibekwe ngendlela enokuthi imigama yokuhamba kunye nokuxinana kweemoto zincinci. Kuyangqinwa ukuba ukuxinana kwetrafikhi kungcolisa ngaphezu kwendlela.
Kwelinye icala, ukwaziswa kwezithuthi ezinamafutha angangcoli kangako kunye nokukhutshwa kweqanda kungabonwa njengeyona nto iphambili. Sithetha ngezithuthi zombane. Ukuba ukuveliswa kombane kuvela kwi-fossil fuel, iya kungcolisa ekudalweni kwayo, kodwa kungekhona ekusebenziseni kwayo. Nangona kunjalo, ukuba umthombo wamandla uvela kwizinto ezinokuphinda zenziwe, isithuthi siya kuphuma ngaphandle.
I-Sertrans kunye ne-ecomobility
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukuhamba ngama-akhawunti ezothutho ama-40% ezinto ezingcolisayo zesixeko. Ngesi sizathu, uSertrans uchithe iminyaka etyala imali kuthutho oluzinzileyo lweempahla. Ngexesha leminyaka bekuqhubeka izinto ezinciphisa ifuthe lokusingqongileyo kwimisebenzi yalo.
Enye yazo lucwangciso olululo lweendlela. Ukunciphisa amaxesha othutho, abakwaSertrans bacwangcisa eyona ndlela imfutshane ekubhekiswa kuyo hayi kwiikhilomitha kuphela, kodwa nakwii-CO2 ezikhutshwayo. Abaqhubi basebenzisa itekhnoloji entsha kwaye basebenzise izilungiso ezinikezwe ngabanye abaqhubi. Ngale ndlela, iindlela zokuhamba ziyancitshiswa.
Elinye inyathelo ngu ukulungiswa kwemithwalo. Iilori zothutho zinkulu kwaye zinokubamba imithwalo emininzi ngaxeshanye. Ngale nto, inani lohambo lunokuncitshiswa kwaye lisondele kwiinjongo zokuzinza.
Okokugqibela, uSertrans Uthutho phakathi kwezinto lonyukile. Yindibaniselwano yothutho lomhlaba kunye nezinye iintlobo zothutho ukungcolisa kancinane.
Njengoko ubona, i-ecomobility ibaluleke kakhulu namhlanje kwaye ayixhomekekanga ekusetyenzisweni kwezithuthi zikawonkewonke kunye neebhayisikile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Yintoni kwaye kubaluleke kangakanani ukungalingani
Amandla ahlaziyiweyo eSpain